Ogaden News Agency (ONA) – Maqaal: 24 Darajo oo Ururwaynaha ONLF Soo Dheelmay Yaan Lagaaga Sheekaynin. By: Xaaji Maxamad
Maqaal: 24 Darajo oo Ururwaynaha ONLF Soo Dheelmay Yaan Lagaaga Sheekaynin. By: Xaaji Maxamad
Posted by ONA Admin	/ December 2, 2015
Hordhaca qoraalkan soo socda hadaan dul istaago Waxaan aad u daneeyay inaan wax ka ogaado heshiiskii dhexmaray Somaliya iyo itoobiya 1988 ugu horayn waxaan waydiiyay su’aashaas sheekh Google.com runtii majirto jawaab rasmi ah, balse waxaan helay xogo kooban ee aan dulmar ku sameeyo-Marxuum Maxamad Siyaad iyo Mangistu xayle maryam oo kala hogaaminayay labadii kacaan ee kajiray somaliya iyo itoobiya ayaa waxaa mid walba fuulay culays ka yimid dhanka mucaaradkii kasoo horjeeday.
Dawladii Itoobiya waxaa faro xun ku hayay mintidiinta Eriteriya. Sanadkaas waxaan ku sugnaa qaar kamid ah magaalooyinka waawayn ee Ogadenya. Qaylo dhaan ayaa ka imaanaysay dhanka Mangistu iyo Xisbigiisa oo shacabka Ogadenya ayuu waydiisan jiray kaalmo dad iyo duunyaba leh. Dawladii Somaliya ayay iyadana ku kacsanaayeen kooxo waqooyi ka jiray oo hadaf qaloocan ku socday. Hadaba si Madaxwayne waliba uga nafiso culayskaas ayay si kadis ah heshiis u abaabuleen Qalinkana ugu duugeen.
Dalka Ogadenya iyo dadkiisa oo guumaysi kujiray ayaan wax lug ah ku lahayn kulamadaas aan soo sheegay taasoo ka dhigan mid kamid ah taariikhaha madow ee lasoo darsay qadiyadda Ogaden! Madaxwayne waliba waxuu la kadeednaa halista kaga imaaneysa mucaaradkiisa hadayna heshiis deg deg ah galina waxay ka cabsadeen inay laamuhu la jabaan!
Taariikhdaasi waa mida sii xoojisay in wax garadkii u dhashay Ogadenya gaar ahaan dadkii dhimbisha halganku ay kujirtay inay la yimaadaan aragti ay kaga xidhiidh furanayaan gabi ahaamba siyaasadii markaa somalia kajirtay ee ku wajahnayd Qadiyadda Ogaden.
Kaadiradii Ururwaynaha ONLF dhidibada ugu aasay sida qarsoodiga ah 1984 ayaad moodaa hadaad u fiirsato inay sii ogaayeen heshiiska dhexmari doona Siyaad Barre iyo Mangistu, Nasiib wanaagse 4 sano kahor ayay ka tashadeen.
Markaan soo aruuriyo xukuumadahaasi way tageen waxaana dhacay is badal ururka ONLF-na si aad ah ayuu uga faa’iidaystay taasoo ahayd inay fursad u heleen is barashada iyaga iyo shacabkooda oo aqoon badani isku seeganayd. Waxaa ka dhashay labadii sano ee Tigreegu Khiyaamada wadeen inay Jabhaduna wacyi galiso bulshada qabybeheeda kala duwan waxaana lasoo xasiliyay dadka ilaa maanta cadwgu loodin la’yahay eed aragtaan.
Maskaxda fuuntada ah ee Tigreegu waxay soo tuftay ayaa ahaa, qoys walba Duqooda reerka waan daldali, Wiilkana waan raafi, Hooyadana waan kufsan, gabadhana waxaan gayn jeel oo sidaan rabo ayaan kayeeli igana ogolaada! jawaabtii ONLF oo umada matalaysay waxay noqotay inay ra’yigaa Hangool dheer iskaga qabtaan, kadibna Qashin, qubka ku riddaan, ficilna kala hortagaan Maxaysatadii Tigreega.
Waxaan ballan qaaday inaan akhristayaasha u soo tabiyo 24 Darajo oo Ururwaynaha ONLF soo dheelmay dabcan waa inta la wada ogyahay ee banaanka taala waxaana dhici karta inay jiraan Guulo ama Darajooyin kaloo aniga iyo dadwaynahaba ka qarsoon. Si aadan akhristow ugu wareerin waan kuu Nambariyay ee ila wadaag-
1-Ururwaynaha ONLF waxay Dalka Ogadenya ka saareen Tashwiishkii caalamka gaadhay ee ahaa inay tahay arin xuduud oo Somaliya iyo Itoobiya u dhaxeysa.
2-Waxay soo kordhiyeen in isku tashi wax walba lagu qabsan karo.
3-Waxay keeneen in itoobiya lala dagaalami karo hadii la helo midnimo iyo mintidnimo.
4-Waxay itaabsii ku muujiyeen in 20-sano iyo kabadan dhulka hayjada lagu noolaan karo.
5-Waxay ku adkaysteen inaan dalka laga dhexbixin si loo fashiliyo qorshaha cadowga ee ah in dalka looga qaxo.
6-Waxay aas aaseen in kuliydo kala duwan Jabhadda loo sameeyo kana qalin,jabiyaan.
7-Waxay sameeyeen saxaafad halgameed afdheer oo lagaga maarmay kuwii ajaanibta.
8-Waxay keeneen fikir ah inaan umada somaaliyeed laga aargoosan oo ah sida cadowgu doonayo.
9-Waxay kasbadeen dadwaynihii dalka u dhashay qadiyadiina way fahamsiiyeen.
10-Waxay ka dhabeeyeen inay maadhka (shidaalka dalka) ku duugan difaacaan.
11-Waxay caalamka ka fureen ilaa 60 xafiis oo si rasmi ah u hawlgala jabhadana hoos yimaada.
12 Waxay dhiseen siyaasaddii dibada iyagoo goob joog ka ah goobaha caalamiga ah.
13- Waxay Guumaystaha ku fashiliyeen goobo caalami ah kagana adkaadeen.
14- Waxay mideeyeen dhalinyada iyo ardayda oo kaalin mugle kuleh halganka.
15. Waxaa kalooy mideeyeen Haweenka ogadenya oo ah laf,dhabarta halganka.
16-Waxay dhiseen culimo iyo xer wada quraan ruug ah oo duco la garabtaagan halganka.
17- Waxay xubin firfircoon ka noqdeen ururka UNPO oo miisaan ku leh UN-ka dhexdiisa.
18- Waxay guumaystaha ku kalifeen in la is horfadhiisto oo farta Isha laga galiyo.
19- Waxay ku guulaysteen in shacabka somalida ogadenya dhexdiisa la walaaleeyo.
20- Waxay hurdada ka toosiyeen qowmiyado badan kuna mideeyeen magaca PAFD.
21- Waxay fashiliyeen dhamaan wixii sir iyo jalaafo ahaa ee cadowgu usoo maleegay.
22- Waxay kasbadeen dawaldo saaxiibo la ah qaar la ogyahay iyo qaar aan la ogaymaba.
23- Waxaa gacanta midig ee ONLF soo gashay siyaasadda hagaysa qadiyada Ogaden.
24- Waxaa ilaahay mahadii ah inay dhiseen Ciidan hubaysan oo karti iyo istiraajiyad leh.
Gabagabadii hadaan ahay qoraaga aaminsan aragtida aad soo aqriday, waxaa u dhiman oo laga sugayaa soomajeed,sadayaasha ONLF inay soo dheelmaan Darajada 25aad oo ah Xornimo macaanto-وماذالك علي الله بعزيز = kumana adka ilaahay swt.
Guul, Gobanimo iyo Allaahu Akbar